भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय ! – Jagaran Nepal
भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय !
वस्तुशास्त्रमा केही यस्ता चिजको बारेमा बताइएको छ, जसलाई आफ्नो आसपास राखेर आफूमा सकारात्मक बदलाव ल्याउन सकिन्छ। यसले भाग्य चम्काउन सकिन्छ। कतिपय मानिस आफ्नो करियर वा व्यापार राम्रो बनाउन दिनरात मेहनत गर्छन्। तर, अपेक्षा अनुसार सफलता पाउँदैनन्। कयौं पटक आसपास रहेको नकारात्मक ऊर्जाले सफलतामा बाधा उत्पन्न गराउँछ।
१) आफ्नो गुड लक बढाउन घरभन्दा बाहिर गमला राखेर त्यसमा बिरुवा रोप्नुस्। गमलामा तीन सिक्का राख्नुस्। सकेसम्म निलो गमलामा बिरुवा रोप्नुस्।२) घर वा कार्यालयमा यस्तो कुर्सी प्रयोग गर्नुस्, जसको पछाडिको भाग सामान्य कुर्सीभन्दा अग्लो होस्। घरमा राखिएको पेन्टिङ वा तस्बिर आफ्नो उचाइभन्दा अग्लो हुनुपर्छ। यसले गुड लक बढाउन मद्दत गर्छ।थप जानकारीका लागि |
यो पनि पढ्नुहोस् :आइतबार जन्मेका मानिसको भाग्य र स्वभाव कस्तो हुन्छ ? साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार सबेका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । साताकै पहिलो दिन भएकाले मानिसहरुले आफ्नो नयाँ योजना अनुसार यो दिनलाई सदुपयोग गर्ने योजना बुनिरहेका हुन्छन् भने यो दिन खासमा भगवान् सूर्य देवताको दिनका रुपमा पनि हेरिन्छ ।